इक्वेटोरियल गिनीमा यात्रा | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | अफ्रिका, के हेर्ने
अफ्रिकामा दुईवटा देशहरू छन् जुन स्पेनीलाई आधिकारिक भाषाको रूपमा छ र ती मध्ये एउटा हो इक्वेटोरियल गिनी। स्पष्ट रूपमा, यो एक स्पेनिश उपनिवेश थियो, र यसैले यसको जनसंख्याको 90 ०% यसमा हावी छ। के तपाईंलाई अफ्रिकामा यात्रा गर्ने र आविष्कार गर्ने विचार मनपर्दछ? पर्यटक आकर्षण यो सानो देश को?
इक्वेटोरियल गुयना हामीलाई प्रदान गर्दछ जीवन्त प्रकृति, महान समुद्र तटहरू इन्डियाना जोन्स, जंगल र औपनिवेशिक खंडहर जताततै। थोरै ज्ञात र थोरै भ्रमण गरिएको देश भएकोले यो अझै रहस्य नै हो, तर यदि तपाइँ आविष्कारको कारनामहरू चाहानुहुन्छ भने ...
1 इक्वेटोरियल गिनी
2 इक्वेटोरियल गिनीको यात्रा
यो भूमध्यरेखीयको नजिक, गुयनाको खाडीमा छ, र यसैले यसको नाम। सामान्यतया अफ्रिका जस्तै यस भूमिलाई पनि विभिन्न कुलले राज्य बनाएका थिए। एक दिन पोर्तुगालीहरू आइपुगे र दासहरूको व्यापार गर्न थाले, तर त्यसको लगत्तै पछि भूमिहरू रियो दि ला प्लाटाको विकेरोयल्टीको स्पेनी क्षेत्रको हिस्सा भयो, दक्षिण अमेरिका मा। वास्तवमा, आधिकारिक कब्जामा लिएको यस अभियानले मोन्टेभिडियो छोडे।
स्पेनी उपस्थितिको पुष्टि गर्न, पछि, शाही आदेशले नि: शुल्क कालोहरू र मुलतुतोहरू जो क्युबामा बसोबास गर्न यहाँ आएका थिए (र त्यहाँ स्वयम्सेवकहरू थिएनन् भने बलपूर्वक), त्यो क्षेत्र जुन शक्तिहरू बीचको विवादको अतिरिक्त थियो। आफ्नै आन्तरिक संघर्ष। तर सत्य यो हो कि त्यहाँ कुनै प्रकारको समायोजन थिएन, र त्यो महाद्वीपको अन्य भागहरूमा जस्तै, उपनिवेश एक रंगभेद प्रणालीमा बस्थे।
पहिले नै बीसौं शताब्दीमा, द्वन्द्वहरू फेरि सुरु भयो, 's०,' s० को दशकमा तिनीहरू भए विदेश क्षेत्र, त्यसपछि स्वायत्त क्षेत्र र अन्तमा १ 1968 .XNUMX मा स्पेनले ठूलो दवावमा दियो स्वतन्त्रता। त्यसपछि तानाशाही आए, तेल शोषण (उप-सहारा अफ्रिकामा कच्चा तेलको तेस्रो ठूलो उत्पादक हो) र मानव अधिकार संगठनहरूबाट गुनासोहरू।
अहिले सम्म, संक्षिप्तमा, देशको इतिहास। अब, इक्वेटोरियल गिनीको भूगोल के हो? ठिक छ, यो केवल २ just हजार वर्ग किलोमिटर छ। यो गेबोन, क्यामरून र एट्लान्टिक सीमानामा पर्छ। यसमा केही टापुहरू छन्, जसमध्ये सब भन्दा महत्वपूर्ण समुद्र तट र g० किलोमिटर टाढा बायोको टापु हो। यो ज्वालामुखी टापु हो, जed्गली, ढुy्गा र बढेको कोकोका लागि धेरै उर्वरा। अन्य टापुहरू बस्ने छैन।
स्वाभाविक रूपमा, इक्वेटोरियल गिनीमा यो धेरै तातो छ। औसत तापमान २º डिग्री सेल्सियस छ र त्यहाँ एक वर्षा .तु छ। यस मौसमले उदार प्रकृतिको विकासको लागि अनुमति दिएको छ जुन वरपरको मुख्य आकर्षण हो। जुन र अगस्त बीच मुख्य भूमिमा सुख्खा मौसम हुन्छ, डिसेम्बर देखि फेब्रुअरी बायोको टापु पनि सुख्खा हुन्छ तर यो सँधै पानी पर्न सक्छ, र नोभेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म कछुवाहरू हेर्नको लागि राम्रो समय हो।
तपाईंले त्यो जान्नुपर्दछ यो यस्तो देश हो जुन धेरै सीमितताका साथ घुम्न जान्छ: त्यहाँ रेलहरू छैनन्केवल सडकहरू र राजमार्गहरू, त्यहाँ पोर्टहरू, एयरपोर्टहरू र म्याड्रिड र राजधानी मालाबो बीच सीधा उडानहरू छन्। सडकको स्थिति राम्रो छ र त्यहाँ केही टोल सडकहरू छन्। कार भाँडामा महँगो छ तर पनि, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, एभिस वा यूरोकारको राजधानीको एयरपोर्टमा कार्यालयहरू छन्। अब शहर र शहरहरूमा यातायात को मामला मा, यो धेरै राम्रो छैन।
धेरै ट्याक्सीहरू सेयर गरिएका छन्छोटो यात्रा को लागी यी सेतो कारहरु रंगीन पट्टी संग लिन को लागी सामान्य छ। यदि तिनीहरू स्वतन्त्र छन् भने तिनीहरू सडकमा रोक्न सक्छन् र यदि तिनीहरू तपाईं गइरहनुभएको ठाउँमा गएनन् भने, त्यहाँ कुनै समस्या छैन र तिनीहरू आफ्नो मार्गमा जारी राख्छन्। लामो यात्राको लागि तपाईले वार्तालाप दरहरू गर्नु पर्छ। त्यहाँ बस छ? हो, तर तिनीहरू साझा ट्याक्सी जस्तै साधारण छैनन्।
इक्वेटोरियल गिनीको यात्रा
यात्रा गर्नु अघि खोपहरूसँग अद्यावधिक रहन यो सुविधाजनक छविशेष गरी पहेलो ज्वरो। तपाईलाई डिप्थीरिया, टिटानस, रुबेला, पोलियो, हेपेटाइटिस ए र बी, रेबीज, र टाइफाइड ज्वरोको बारेमा पनि सचेत हुनुपर्छ। र स्वाभाविक रूपमा, भाडामा राम्रो स्वास्थ्य बीमा र मलेरिया बिरूद्ध प्रोफेलेक्सिस पछ्याउनुहोस् जसमा लामखुट्टे हटाउने शक्ति हुनुपर्दछ। पानी? धारा पानी पिउन योग्य छैन।
यी सबै कुरा थाहा पाउँदै, सानो इतिहास, थोरै भूगोल, केही व्यावहारिक प्रश्नहरू, अब हामीले कुरा गर्नु पर्छ इक्वेटोरियल गिनीमा के भ्रमण गर्ने। खैर यो सबै सुरु हुन्छ मलाबो, राजधानी। पूर्वमा छ बन्दरगाह र पुरानो शहर यसको औपनिवेशिक वास्तुकलाको साथ जहाँ क्याथेड्रल बाहिर खडा छ। पश्चिममा सर्वश्रेष्ठ उपनगरहरू, दूतावासहरू, मन्त्रालयहरू र होटलहरू छन्। केन्द्रमा किनमेल केन्द्रहरू, अधिक आधुनिक भवनहरू, रेस्टुरेन्टहरू र अधिक होटलहरू छन्।
मालाबो उत्तरमा, बायोको टापुको तटमा छ र छ देशको सब भन्दा पुरानो शहर। पर्यटन समयको क्रममा बढ्दै गएको छ र तेलले ल्याएको धनले नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्न अनुमति दियो। उदाहरण को लागी, Sipopo शहर को लागी व्यापार पर्यटन।
मालाबो मा छ महल जस्टिस, प्रेसिडेन्सीको महल, सुन्दरता सान्ता इसाबेलको क्याथेड्रल, निओ-गोथिक शैली, दुई -० मिटर अग्लो टावरहरूको साथ, घर ला Gaditana, ला Theodolite हाउस, दुबै पूर्व निवासहरू बीसौं शताब्दीको शुरुदेखि, प्लाजा डे ला स्वतंत्रता वा स्पेनको सांस्कृतिक केन्द्र। तपाईं आधुनिक कलाको संग्रहालय थप्न सक्नुहुन्छ जुन सम्पूर्ण अफ्रिकाबाट कला ल्याउँदछ।
La बायोको टापुइक्वेटोरियल गुयना भन्दा क्यामेरूनको नजिक, यसमा ठूलो समुद्र तटहरू छन्दुबै कालो र सेतो बालुवा। यसमा वर्षावन, सवाना र ज्वालामुखी चुचुरो पनि रहेको छ, उदाहरणका लागि, केवल 3000००० मिटर भन्दा अग्लो पिको बासिल, सबै बादलले ढाकिएको छ। यहाँ छ Pico Basile राष्ट्रीय पार्क, एक विशिष्ट वर्षावन जुन तपाईं दृश्यहरू आनन्द लिन पहाडीमा घुम्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ टुरहरू छन्, यद्यपि शीर्षमा पुग्न सकिएन किनकि यो एक सैन्य क्षेत्र हो।
राजधानी मालाबोले तपाईंलाई केहि दिनको लागि व्यस्त राख्न सक्दछ, तर लामो समय होइन, त्यसैले यो अन्वेषणमा जानको लागि समय हो। उदाहरण को लागी, Ureca यो टापुको राम्रो दक्षिण हो र यो सुन्दर छ। यहाँ तपाईं चार प्रकारका कछुवाहरू देख्न सक्नुहुन्छ जुन नोभेम्बर र फेब्रुअरी बीचमा आइपुग्छ उनीहरूको अण्डा बालुवामा। वरपर घन ज forest्गल पनि छ लुबा क्रेटर जहाँ प्राइमेटहरू बस्छन्।
उही नामको सानो शहर पनि छ, लबाबास्यान कार्लोस खाडीको दक्षिणी किनारमा अवस्थित धेरै सक्रिय पोर्टको साथ। तपाईं यहाँ खाजा लिन सक्नुहुनेछ जब तपाईं दिनको टापु र यसको समुद्री तट, एरेना ब्लान्काको चारै तिर यात्रा गर्नुहुन्छ, यसको पुतलीहरूसँग धेरै लोकप्रिय छ।
अरेना ब्लान्का बीच एक सौन्दर्य हो र तपाईं आफ्नो कार छोडेर त्यसमा हिंड्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पार्कि lotको वरिपरि बारहरू छन् र तिनीहरूलाई आइतवार भीड गर्न सकिन्छ। क्षेत्र मा तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ लुबा दृष्टिकोण, मार्गमा दुई दृश्यहरू मध्ये एक जुन बायोको टापु र दुईमा सब भन्दा माथि छ। कस्तो दृश्य! अर्को हो मोका दृष्टिकोण, टापु र समुद्रको दर्शनीय दृश्यहरूका साथ।
इक्वेटोरियल गिनीमा रहेको अर्को टापु हो कोरिसको टापु त्यो शानदार समुद्र किनारको मालिक हो। शहर सानो छ, यद्यपि त्यहाँ धेरै निर्माण भइरहेको छ, त्यहाँ एक मरीना र याट क्लब संग एक होटल छ र बोर्डवाक मा एक राम्रो बजार। टापुमा छ फang्ग गाउँ, एक सानो सानो जो यसको समुद्री तटको लागि धेरै लोकप्रिय छ, जहाँबाट तपाईं गाबन र एलोबी टापुहरू देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले यसलाई अकोगाको नजिक फेला पार्नुभयो, जुन बदलेमा कोगोबाट १ 13 किलोमिटर मात्र छ।
यदि तपाईं गुयनामा हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई प्रकृति मनपर्दछ, त्यसैले अर्को राम्रो भ्रमण भनेको माउन्ट एलन हो, अफ्रिकाको यस भागको खजाना। को मोन्टे एलेन नेशनल पार्क यो मुनि नदीको किनारमा २,००० वर्ग किलोमिटर वर्षा र वन्यजन्तुहरूको क्षेत्र हो, झरना र ताल, गोरिल्ला, चिम्पान्जी, हात्ती, गोही र धेरै अफ्रिकी जनावरहरू सहित। यो तातो ठाउँ हो र गाईड हुनु आवश्यक छ त्यसैले एक्लै नजानुहोस्। होटेल जुन यहाँ काम गर्थ्यो अब छैन।
इक्वेटोरियल गिनी यसले हामीलाई प्रदान गर्दछ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, प्रकृति र ईतिहासको एक धेरै। यो पर्यटन को लागी एक धेरै संगठित देश होईन र यसले निश्चित रूपमा एक्लो सर्न को लागी धेरै सजिलो बनाउँदैन, अझ खराब, यदि तपाईं डराउनु हुन्न भने, यदि तपाईंलाई साहसिक मन पर्छ, यदि तपाईं समूहमा यात्रा गर्नुहुन्छ र आफ्नो दिमाग खोल्न चाहनुहुन्छ भने, यो त्यस्तो गन्तव्य हो जुन तपाईंले पक्कै पनि बिर्सनुहुन्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अफ्रिका » इक्वेटोरियल गिनीमा यात्रा
Alcázar de San जुआन